China Maitiro ekusiyanisa uye kushandisa kuzviparadzanisa zvipfeko uye zvekurapa zvinodzivirira zvipfeko Kupfeka uye Fekitori | Zhongmaohua
Maitiro ekusiyanisa nekushandisa zvipfeko zvekuzviparadzanisa uye zvipfeko zvekudzivirira zvekurapa
Ndeupi musiyano uye kushandiswa kwezvipfeko zvekuzviparadzanisa uye zvipfeko zvekudzivirira zvekurapa ndezvekuti zvipfeko zvekudzivirira zvekurapa zvinogara zvakanyanya pane zvipfeko zvekuzviparadzanisa, zvine chikamu chepamusoro chekudzivirira uye kuita zviri nani kwekudzivirira. Mukuwedzera pakusangana nezvinodiwa zvekupfeka zvekusimba zvakanyanya uye nekupfeka kwepamusoro, izvo zviviri zvinowanzove zvakasiyana nekuda kwezvikonzero zvakasiyana zvekudzivirira uye nheyo dzekudzivirira.
Maitiro ekusiyanisa pakati pezvipfeko zvekuzvipfekedza uye zvipfeko zvekudzivirira zvekurapa
Kunyangwe zvipfeko zvekudzivirira zvekurapa zviri nani pane kuzvipfekedza zvipfeko, asi mutengo wacho wakakwira, saka pamabasa akasiyana, sarudzo yezvipfeko zvinodzivirira ichave yakasiyana. Musiyano uripo pakati pezvimiro zvezvipfeko zvekudzivirira zvekurapa uye zvipfeko zvekuzviparadzanisa nevamwe.
Anodzivirira zvipfeko anoshanda uye anoshandisa
Chipfeko chekudzivirira chekurapa ndicho chidziviriro chekurapa chinopfekwa nevashandi vezvechiremba vekiriniki pavanosangana nevarwere vane Mukirasi A kana Kirasi A chirwere chinotapukira. Isolate zvipfeko zvishandiso zvinoshandiswa nevashandi vekurapa kudzivirira kusvibiswa neropa, mvura yemuviri uye zvimwe zvinhu zvinotapukira, kana kudzivirira varwere kubva kuzvirwere.
Zviratidzo zvakasiyana zvevashandisi
1. Kana uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge unawo mukana kana uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge unawo mukana kana uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge unawo hutano hwakanaka.
2. Kuchengetedzwa kwekusiyaniswa kwevarwere, sekunge kuongororwa pamwe nekurapwa kwevarwere nekutsva kwakanyanya nevarwere vane kutapurirana kwemapfupa.
3. Kana murwere anogona kusaswa neropa, mvura yemuviri, makumbo uye manyowa.
4. Kupinda madhipatimendi akakosha akadai seICU, NICU, wadhi dzinochengetedza, nezvimwewo, kana kupfeka zvipfeko zvekuzvimiririra, zvinofanirwa kuve zvakavakirwa pachinangwa chevashandi vekurapa kuti vapinde uye vabatane nevarwere, nemirairo yakakwana yemukati.
Pfeka zvipfeko zvekudzivirira zvekurapa:
Kana dzikavhenekwa varwere vane chirwere chinokonzerwa nemhepo uye madonhwe anotapukira, dzinogona kusaswa neropa remurwere, mvura yemuviri, makumbo, uye ndove.
Kushandiswa kwakasiyana kwezvipfeko zvekudzivirira
Chipfeko chekudzivirira chekurapa ndechekudzivirira vashandi vekurapa kuti vasabatwe. Iyo ndeya imwe-nzira yekuzviparadzanisa uye inonyanya kuverengerwa vashandi vekurapa; uye yekuzvipfekedza mbatya ndeye kudzivirira vashandi vekurapa kuti vasatapukirwa kana kusvibiswa uye kudzivirira varwere kuti vasabatwe.
Zvakanakira zvipfeko zvekudzivirira zvekurapa pane zvipfeko zvekuzvimiririra
1. Chipfeko chekudzivirira chekurapa zvakare chikamu chakakosha chemidziyo yekudzivirira yekurapa. Chinodiwa chayo ndechekuvhara zvinhu zvinokuvadza zvakaita sehutachiona uye hutachiona, kuitira kuchengetedza vashandi vekurapa kubva kuzvirwere panguva yekuongororwa uye kutarisirwa.
2. Chipfeko chekudzivirira chekurapa chinofanirawo kusangana nezvinowanzoitwa pakushandisa, zvine kupfeka zviri nani uye kuchengetedzeka, sekuita kwakanaka kunyorova kupera, murazvo kudzoreredza mashandiro uye doro kudzora kutu.
3. Chipfeko chinodzivirira chekurapa chine hunhu hwe anti-permeation basa, kufema kwakanaka, kusimba kwakanyanya uye kwakakwirira kuramba kwe hydrostatic kudzvinyirira. Inoshandiswa zvakanyanya mumaindasitiri, zvemagetsi, zvekurapa, zvemakemikari uye hutachiona hwekudzivirira hutachiona.
Imwe pfungwa zvakare yakatosiyana. Avo vanopa zvipatara mukukumbirwa nehurumende vanoda "gwaro rekunyoresa mvumo", saka zvipfeko zvese zvekudzivirira zvekurapa zvinofanirwa kuve zvinosimbiswa, uye zvipfeko zvekuzvimirira zvinowanzo shandiswa muzvipfuyo, mumarabhoritari, nezvimwewo munhu wese anofanira kuteerera kuti avo vasina chitupa chinogona chete kuyedza yekuzvipfekedza zvipfeko uye haigone kuchipa kuchipatara.
Nguva yekutumira: Chivabvu-07-2020